Arịgoro na Zaịọn wee bibie ya na Auschwitz, Rebbe gwara ha ka ha ghara arịgo. Rabbi Michael Avraham
Abịaghị na Zayọn wee kpochapụ ya na Auschwitz, Rebbe gwara ha ka ha ghara ịkwaga.
Nzaghachi > Atiri: Okwukwe > Abịaghị na Zayọn wee kpochapụ ya na Auschwitz, Rebbe gwara ha ka ha ghara ịkwaga.
Na-emenye ihere site na ihere Ajụrụ ya ọnwa 5 gara aga
Ezinụlọ m nwere afọ ojuju ịlaghachi na Zayọn. (N'ihi ịkpọasị nke ndị Jentaịlụ gburugburu, ha bara ọgaranya nke ukwuu, ọ dịghịkwa ihe kọrọ ha)
Rebbe gwara ha ka ha nọrọ n’ala ọzọ ma kwe nkwa na ọ ga-adị mma.
Kwere na rebbe ahụ alaghachighị na Zaịọn na Ifrem na Auschwitz nke iri na anọ na ọbara nke mkpụrụ ha kwa site na rebbe ahụ kwere nkwa na n’ihi nkwa ha e bibiri.
Mana na Jeremaịa XNUMX n'ụzọ megidere nke ahụ, ndị amụma ụgha na-akwado nloghachi nke Zaịọn na Jeremaịa n'aha Chineke na-ekwu mba.
Naanị afọ 70 ọzọ
Ma ugbu a, omume ahụ agbanweela, na Babịlọn, anyị ga-ewu ụlọ ma lụọ ụmụ nwanyị. + na ndị Jeruselem ga-egbu na agụụ.
Yabụ kedu ihe ziri ezi?
Ịlaghachi na Zayọn ma ọ bụ ọzọ ka ọ biri na ndọkpụ n'agha?
Nke a bụ njide siri ike. Ihe niile n'onwe ya. Onye rebbe kwuru echiche ya ka ọ ghara ibilite n'ihi ihe nke ya, kwuru ihe ziri ezi. Ihe ahụ mejọrọ emechaghị amanye ya ihe ga-esi na ya pụta. Ọ dighi onye ọ bula di n'aka-ya. Ọ bụrụ na o kwere nkwa na-enweghị isi mgbe ahụ enwere ike karịa.
Ma ndị amụma, ha na-ekwu ihe ọmụma amụma, n'ihi ya, e nwere a kpamkpam dị iche iche mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ha ekwe nkwa ihe ọ bụla, ọ bụ n’aha Jehova.
N'ozuzu, azịza nye ajụjụ ma ị ga-akwaga mba ọzọ abụghị mgbe niile otu azịza. Mgbe ụfọdụ, ọ dị mma ịgbago elu ma mgbe ụfọdụ ọ bụghị. Ọ bụ ezie na e nwere iwu iji dozie ala ahụ, ma onye amụma na-ewepụ ihe ọ bụla site na Torah na Oké Mgbukpọ ma ọ bụ site na awa.